Thursday September 05, 2019 - 14:24:13 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Sultan Ahmed bin Sulayem ayaa madax u ah shirkadda DP
Warbixintan uu daabacay wargeyska Ha'aartis ayaa sheegaysa in diyaarado ay leedahay dowladda imaaraatka carabta ay dhowr jeer soo caga dhigteen garoonka diyaaradeed ee ugu weyn dhulka Yahuuddu haysato.
Diyaarad nuuceedu yahay Boeing 737 oo urarneed shirkadda dekadaha Dubai ee loo yaqaan DP World ayaa caga dhigatay madaarka caalamiga ah Ben Gurion Axaddii lasoo dhaafay.
Ilo wareed lagu kalsoonyahay ayaa wargeyska uxaqiijiyay in diyaaraddu muddo saacada ah ay fadhiday garoonka ka hor intii aysan dib ugu laaban imaaraatka carabta.
Waxaan la ogeyn dadka ay sidday diyaaradaan haddii ay yihiin mas'uuliyiin ganacsi ama kuwa amni laakin waxaa laysku raacsanyahay in saraakiil imaaraatiyiin ah ay diyaaradda wateen.
Wargeyska Ha'aastis wuxuu leeyahay isbuucii lasoo dhaafay oo kaliya illaa iyo sedax booqasho ayay saraakiil imaaraatiyiin ah ku tageen Yahuudda iyagoo watay diyaarado khaas ah waxayna booqashooyinkan imaanayaan xilli wakillada mareykanka ee Carabta ay isku diyaarinayaan dhaqan gelinta heshiiskii loogu magac daray safqatul qarni ee uu garwadeenka ka yahay Donald Trump.
Saxiifadda Yahuudda laga leeyahay ee lagu magacaabo Times of Israel ayaa kasoo warisay madaxa maamulka shirkadda DP World ee imaaratka laga leeyahay ninka lagu magacaabo Suldaan Axmed Bin Suleym inuu booqday dhulka Yahuuddu gumeysato wuxuuna booqashadiisa ku macneeyay arrimo ganacsi iyo kuwa horumarin ah wuxuuna caddeeyay in cilaaqaadka kala dhaxeeya shirkaddiisa Yahuudda uu ku koobanyahay oo kaliya majaalka ganacsiga iyo shaqada.
warbixintu waxay sheegaysaa in afartii sanadood ee lasoo dhaafay uu maamulka Yahuudda uu xafiis metelaad rasmi ah ku lahaa magaalada Dubai waxaana halkaas booqday wasiirro iyo jeneraallo katirsan sirdoonka dibadda Yahuudda ee Musaadka loo yaqaan.